Candid, Featured, Featured Collectives, Flare, Ko Gyi Kyaw Tattooist, pictures of the month, PortraitInCrowd, Street Photography, StreetPhoto_Color
Picture of The Month For #PortraitInCrowd Theme January, 2018
Yangon, Myanmar. 2018
© Ko Gyi Kyaw Tattooist
by Ye Aung Thu, Founder
ပထမဆုံးပြောချင်တာက POM ရွေးပေးခွင့်ရတဲ့အတွက် FC နဲ့ အဖွဲ့သားတွေ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. တကယ်မိုက်တဲ့ စတွိတွေ ကြည့်ရတာ အတွက်ကော စတွိ ဖိုတိုဂရက်ဖီ စိတ်ဝင်စား တကယ်လုပ်နေတာတွေ အားရတာအတွက်ကော ကျေးဇူးတင်တာပါ …
ဒီလအတွက် ၁၀ပုံ ရွေးတဲ့အခါမှာ ပုံတွေ မိုက်နေတဲ့ပုံတွေ တွေ့ရသလို တချို့ပုံတွေက crowd ထဲက လူဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး ရိုက်ထားတာတွေလဲ တွေ့ရတယ် .. ကျနော်တဦးတယောက်ထဲ အမြင်ပါ .. မှားကောင်းမှားနိုင်ပါလိမ့်မယ် .. စတွိဆိုတာ လမ်းမမှာ ရိုက်ပြီးရောနဲ့တော့ မပြီးသွားစေချင်ဘူး .. ဖန်တီးမူ အနုပညာ ဘောင်တွေမခတ်ထားပေမယ့် သီအိုရီတွေ ဖယ် မထွက်သွားတဲ့ အနုပညာတွေ ပါစေချင်တယ် … ကျနော့်အမြင်သပ်သပ်ပါ .. ဒါပေမယ့် ဖြစ်စေချင်ပါတယ် … ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဝါး …. လခွမ်းထဲမှ … သေစမ်းကွာ စိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတာမျိုး ချက်ခြင်းဖြစ်ရင်ဖြစ် မဖြစ်ရင်တောင် တစိမ့်စိမ့် ကော်ဖီသောက်ရင်း ၁၀မိနစ်လောက် ထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ ပုံမျိုး … စတွိမျိုး တွေဖြစ်စေချင်တာပါ … အခု Theme က #PortraitInCrowd ဆိုတာနဲ့ လူအုတ်ထဲမှာ ရိုက်ချလိုက်တာမျိုးတွေ မြင်ရတယ် … တကယ်တော့ ဘာ ဖိုတိုဂရက်ဖီ မဆို အနုပညာဆန်တာမျိုးမေ့မေ့သွားကြပြီး သိမ်းနဲ့ကိုက်ရင်ပြီးရောဆိုတာမျိုးဖြစ်နေသွားတာ တွေ့တော့ တချိုကဟာလေးတွေ နှမြောမိတယ် … သေချာ ရိုက်လိုက်ရင် မိုက်တာမျိုးတွေ အများကြီးတွေ့မိတယ် …
အခုပုံရွေးဖြစ်တာကတော့ ကာလာကွန်ပိုဇေးရှင်းလဲကြိုက်တယ် .. လူတွေရဲ့ ဟန်ပန်တွေလဲ မိုက်တယ် .. ပြီးတော့ မြင်တတ်တဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာရဲ့ ဖရိန်ကိုလဲ ခိုက်မိတယ် … ဒါကြောင့် ဒီပုံကို နောက်ဆုံးအကြိတ်အနှယ် ၃ပုံထဲက နေရွေးဖြစ်တာ … ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
To view other #PortraitInCrowd theme POM: https://goo.gl/zxeJzc
To view #PortraitInCrowd
theme photos: https://goo.gl/Ghv6b1